Raharaha fahafatesana karana :: Voatazona eny am-ponja hatrany ireo voampanga • AoRaha
Raharaha fahafatesana karana Voatazona eny am-ponja hatrany ireo voampanga
Nodidian’ny Fitsarana ny fanafahana noho ny fisalasalana an’ireo olona efatra voampanga tamin’ny raharaha fahafatesana Karàna iray, teny Ivandry, tamin’ny taon-dasa. Mbola voatazona any amponja hatrany anefa izy ireo, na dia teo aza io didim-pitsarana tamin’ny 3 jona lasa teo io. Mametra-panontaniana ny anton’ny tsy amoahana azy efatra ireo mpisolavava an’ireto voampanga.
Araka ny re tamin’ny loharanom-baovao iray dia nisy ny fampiakarana ny raharaha any amin’ny Fitsarana fandravana didy, izay heverina fa manazava an’izao fanohizana ny fitazonana an’ireo efa-dahy eny am-ponja izao.
Milaza ny hitondra ny raharaha eny amin’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenana avy hatrany kosa iretsy mpisolovava iretsy, « fa tsy hiandry ny vokatry ny didimpitsarana fandravana, izay tsy fantatra, hoy izy ireo, na ho afaka roa taona na afaka folo taona ». Hampahafantarin’izy ireo amin’ny fikambanana samihafa miaro ny zon’olombelona ihany koa ny zavamisy, hatrany amin’ny fikambanana Amnesty international, raha ny fanambaràna nentin’ ny Me Rambeloson Njivasoa Nathalie, isan’ireo mpiaro azy efatra voampanga iretsy.
Fikendrena sokajin’olona Nokaramaina telo tapitrisa ariary tsirairay ireo mpaka varira
Fisolokoina sy halatra Mpivady nandroba vehivavy
Fanenjehana jiolahy Efa-dahy lavon’ny bala tany Farafangana
Raharaha fandratrana :: Naverim-potsiny ilay vadintany lasibatry ny vono
Fahaverezana ankizy :: Nifandona ny zandary sy ny andian’ olona teny Ambohitrimanjaka